मङ्कीपक्स्काे जाेखिम बढ्दाे क्रममा; ब्राजिलमा पनि पहिलाे पटक मङ्कीपक्स् पुष्टि ! - Info Nepal
INFONPLअन्तराष्ट्रियमङ्कीपक्स्काे जाेखिम बढ्दाे क्रममा; ब्राजिलमा पनि पहिलाे पटक मङ्कीपक्स् पुष्टि !
घ्युकुमारीको प्रयोग नियमित गर्नुभएको छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला!
सावधान ! काठमाण्डौमा थप २ जनामा है`जा पुष्टि, प्रकोप फैलिने जोखिम भएकाे भन्दै डाक्टरहरुले दिए यस्ताे सुझाव